Taliyaha Nabadsugidda oo tegay Dhuusa Mareeb una gogol xaaraya booqashada madaxweyne Xasan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wafdi uu hogaaminaayo Taliyaha hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya, Jen. C/raxmaan Tuuryare ayaa maanta gaaray degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Taliyaha Nabadsugidda waxaa socdaalka ku wehlinaya saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya.
Taliyaha ayaa markii u gaaray magaalada DhuusaMareeb waxaa uu kormeeray xarunta hay’adda Nabad Sugida oo ku yaala magaaladaasi isagoo sidoo kale kormeerey saldhig lagu tababaro ciidanka hay’adda Nabad Sugida.
Socdaalka Taliyaha hay’adda Nabad Sugidda, Janaraal C/raxmaan Maxamuud Tuuryare uu maanta ku tagay ayaa waxaa uu imaanayaa iyadoo la filayo inuu dhawaan halkaas gaaro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Marka madaxweynaha Soomaaliya booqanayo magaalooyinka waaweyn waxaa kasoo hormara wafdi amaan oo horudhac ah, kuwaasoo marka hore qiimeynaya xaaladda amaan ee magaalada uu booqanayo.